Amidy ny Stardew Valley: efa ho ny antsasaky ny vidiny mandritra ny andro | Androidsis
Stardew Valley dia amidy ankehitriny saika ny antsasaky ny vidiny andro vitsivitsy. Lalao izay niaraka taminay tamin'ny Android nandritra ny herintaona ary napetraka ho ankafizin'ireo miloka amin'ny lalao premium misy kalitao tsara na aiza na aiza no jerenao.
Efa nanao ny famerenana tamin'ny androny izahay gaga inona no atolotry ity simulator RPG fambolena sy fiompiana ity, ary ahafahanao manana ny zaridainanao, ny hazo fihinanao, ny akohoo ary ny safidy tsy manam-petra hahatonga ny toeram-pambolanao tsy manam-paharoa.
Ilay iray efa ho antsasaky ny vidiny dia midika hoe afaka mahazo Stardew Valley ianao amin'ny € 5,49, raha mazàna dia mitentina € 8,99. Fotoana iray tsy manam-paharoa hanana lalao izay havaozina tsindraindray ary hahazo multiplayer ato ho ato; raha izany, raha mila lalao mitovy amin'izany amin'ny multiplayer ianao, aza adino ny fotoana nifaneraseranao tamin'i Harvest Town.
Stardew Valley dia miavaka noho ny kanto pixel tsara ananany, ny lamosiny, ny mety hahatongavana any an-johy hahazo fitaovana ary hamono bibikely, ary mazava ho azy, ny mampiavaka azy amin'ny kintana: mahay mamboly, manangona ary mivarotra ny voankazo.
Simulator amin'ny toeram-piompiana izay manome anao ny zavatra rehetra amin'ny fandoavana tokana sy izany lasa loharanom-panahy ho an'ny simulator hafa maro izay te hanaraka ny diany. Lalao novokarin'ny programmer tokana ary azo jerena amin'ny PC sy consoles. Saingy ho avy ny tsara rehefa eo ny Multiplayer, satria hanitatra be dia be ny safidiny io mba hahafahanao mankafy amin'ny namanao sy mampiseho azy ireo ny toeram-pambolanao.
Aza adino ny fanendrena aryAfaka mividy ny Stardew Valley amin'ny € 5,49 mandritra ny andro vitsivitsy ianao. Tsy fantatsika hoe oviana marina no nifarana ny tolotra, saingy nanomboka ny asabotsy io, ka aza mandany fotoana ary mahazoa izao. Amporisihinay 100% izany amin'ny Androidsis.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Stardew Valley amin'ny antsasaky ny vidiny mandritra ny andro vitsivitsy: ny anjara asa fambolena tsara indrindra amin'ny findainao
Ity no haingana ny fiasan'ny menio fizarana amin'ny Android 10